कस्तो रोग हो कालो ढुसी ? यो रोग लाग्यो भने के गर्ने ? « Sagarmatha Daily News
कस्तो रोग हो कालो ढुसी ? यो रोग लाग्यो भने के गर्ने ?
कोरोना भाइरस महामारीले त्राहीत्राही बनाइरहेका बेला अर्को रोगको संक्रमण देखिएको छ। फंगसले निम्त्याउने कालो ढुसी (म्युकरमाइकोसिस)बाट कोरोना संक्रमितकै ज्यान जान थालेको छ। यसले बिरामीको आँखा, नाक र अनुहारमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। कोरोना लागेका बिरामी निको हुने बेलातिर कालो ढुसीको संक्रमण हुने गरेको पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। पौडेलका अनुसार झन्डै एक दर्जन व्यक्तिमा कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये सीमावर्ती नेपालगन्जमा तीन र वीरगन्जमा दुई जनामा पुष्टि भएको छ। काठमाडौंमा तीनवटा अस्पतालमा केही संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
कस्तो रोग हो कालो ढुसी (म्युकर माइकोसिस) ?
सामान्य अर्थमा भन्दा म्युकर माइकोसिस एक प्रकारको ढुसी हो । यस रोगको संक्रमितहरुमा आँखा, नाकमा फंगस अर्थात् ढुसीको इन्फेक्सन देखिने गर्छ । विशेषगरी मधुमेहका रोगी र कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारको क्रममा स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गरिन्छ । स्टेरोइडको प्रयोगपछि रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने समूहमा यस्तो समस्या बढी देखापर्छ । इम्युनिटि पावर कम भएको मान्छेहरुलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
नेपालमा यो रोग हालसालै मात्र देखिएको हुनाले यसको विषयमा चिकित्सकहरुले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्छ । हाम्रो देशमा यसको विज्ञ चिकित्सक नभएको हुनाले, यसको औषधिको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
यसका लक्षण ?
नाक बन्द हुने, टाउको दुख्ने, नाकबाट रगत वा कालो पदार्थ आउने नाकको वरपर कालो धब्बा जस्तो देखिने, आँखा सुनिने तथा दुख्ने यसका मूख्य लक्षण हुन् । यसको संक्रमणले फोक्सोमा पनि असर गर्न सक्छ । साथै, समयमै उपचार नहुँदा आँखाको दृष्टि समेत गुम्न पुग्छ । तर, समयमै उपचार भयो भने निको हुन्छ ।
एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ कि सर्दैन ?
म्यूकर माइकोसिस एउटा मानिसबाट अर्कोमा सर्दैन । त्यसैले संक्रमितहरु धेरै आत्तिन वा डराउनु पर्दैन । यो एकदमै कमजोर शरीरमा देखा पर्छ । नेपालमा यो रोग पहिले देखिएको थिएन ।
यो समस्या एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा हामीले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले संक्रमणको बारेमा चिकित्सकहरुलाई तालिम दिने । उपचार सहज बनाउने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानुपर्छ ।
यो रोग लाग्यो भने के गर्ने ?
फंगस इन्फेक्सनको लक्षणहरु देखिने बित्तिकै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नु पर्छ । समयमा नै रोग पत्ता लाग्यो भने यसको उपचार हुन सक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधिको प्रयोग गर्ने । धेरै आत्तिएर आत्मबल कमजोर बनाउनु हुँदैन । इम्युनिटि पावर बढाउने डाइट फलो गर्ने र व्यायामहरु गर्ने ।
कोरोना महामारीले सबैलाई त्रसित बनाईरहेको समयमा यसको लक्षणले मानिसहरुमा थप तनाव दिने भएकोले यसको लक्षणहरुको बारेमा धेरै चर्चा नगर्दा राम्रो हुन्छ यसले मान्छेहरुको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । नाक बन्द हुने वा टाउको दुख्ने बित्तिकै डराएर आत्मबल कमजोर बनाएर म्यूकर माइकोसिस भयो भनेर आत्तिनु पनि हुँदैन ।
मधुमेहका बिरामीहरुले आफ्नो सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्ने, इम्युनिटी कम भएका मानीसहरुले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार इम्युनिटी पावर बढाउने औषधि तथा खानाको सेवन गर्ने, कोरोना संक्रमितले भने स्टेरोइड औषधिको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र प्रयोग गर्ने लामो समयसम्म चिकित्सकको सल्लाह बिना यसको प्रयोग नगर्ने,घरको वरपर ढुसी लाग्ने वा कुहिने वस्तूहरु नराख्ने ।,कोरोना संक्रमितहरु आइसोलेसनमा बसेको कोठाहरु हावा छिर्ने भेन्टिलेसन भएको हुनुपर्छ ।, चिसो ओसिलोे कोठामा ढुसी लाग्ने भएकोले त्यस्तो कोठामा बस्नु हुँदैन ।,इम्युनिटी पावर कम भएको व्यक्ति बस्ने कोठामा ढुसी लाग्ने किसिमको बिरुवाहरु राख्नु हुँदैन । घर बाहिर निस्कदा सधै मास्कको प्रयोग गर्नु पर्छ । मधुमेह, क्यान्सर र मिर्गौलाका बिरामीहरुले समय–समयमा शरीर जाँच गराउनु पर्छ ।घर वरपरको सफाईमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । ढुसी लाग्ने खाल्को कुनै पनि सामानहरु छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्छ ।
-डा. प्रभात अधिकारी, संक्रामक रोग विशेषज्ञ